Hi-Fi tsara indrindra Turntables 2017 - mpividy ny Guide - China 10TURNTABLES
> Best Hi-Fi Turntables 2017 - mpividy ny mpitari-dalana
Hi Fi Turntables famaritana Comparison
Brand Name lovia Drive system hafainganam-pandeha Cartridge Buttons
Audio- Technica AT-LP120-USB Silver Aluminum Belt fiara 2 hafainganam-pandeha AT95E Check Price
Teac LP-R550USB Turntable plastika Belt fiara 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Numark TTUSB	 Aluninum Belt fiara 2 hafainganam-pandeha Audio-Technica cartridge Check Price
Teac TN-300 Analog Turntable (Black) Aluminium Die-raharaha Belt fiara 2 hafainganam-pandeha MM TYPE (audio-technica AT95E Check Price
Fluance RT80 High Mivadika Amin'ny Vadinao vinyl Turntable Record Player Aluninum Belt fiara 2 hafainganam-pandeha MM TYPE (Audio-technica AT95E) Check Price
TEAC LP-P1000 Turntable Plastic Belt fiara 3speed TEAC STL103X2 Check Price
Pro-Ject - Début Carbon DC (Black) Aluminum Belt fiara 2 hafainganam-pandeha Ortofon OM5E Cartridge mialoha tsoavaly Check Price
Rega - RP1 Turntable (White) New float fitaratra 'Optiwhite' voalambolambo sisiny 12mm Belt fiara 2 hafainganam-pandeha Rega Carbon Check Price
Music Hall MMF 2.2LE Limited Edition Audiophile Turntable mozika mampihetsi-po ny fanahy efitrano-andriamby cartridge amin'ny fanoloana Belt fiara 2 hafainganam-pandeha MMF 2.2 Check Price
U-Miverena Audio - mihodina Plus Turntable (manga) Acrylic Belt fiara 2 hafainganam-pandeha Ortofon OM5E amin'ny boribory lavalava diamondra penina Check Price
Frequency Valiny: 20-20,000 Hz
Fantsona Separation: > 20 dB amin'ny 1 kHz
Tracking Force Range: 1.5-2.5 grama 2.0 grama (20 MN) soso-kevitra Tracking hery
Recommended Load Impedance: 47.000 ohms Output 3.5 MV (1 kHz, 5 sm / sec)
Channel mandanjalanja: ao anatin'ny 2.0 dB
Penina Type: 0.4 X 0,7 Mil boribory lavalava diamondra penina
Cantilever: firaka Tube
Tendrombohitra: antsasaky ny santimetatra
Hanomboka zavatra eny, Audio-Technica dia napetraka marika avy any Japana izay voaporofo ny indostrian'ny-peo nandritra ny taona maro fa ny vokatra dia lafo, mendrika hampihatra izay mampihatra sy mendri-piderana. Raha ny fihainoana andavanandro, dia afaka tsy ho diso amin'ny impeccable Audio-Technica AT-LP120-USB. Io no modely mivantana-fiara professionalturntable Izay manan-mahay maneho feo izay mahatonga azy io ho toy izany mahagaga takatry ny vidiny.
Fa $ 289, ianao dia mahazo maimaim-poana manahirana turntable araka ny manana switchable naorina-in preamplifier amin'ny MANAN-TANTARA-lenta RCA output telegrama; izany hoe ianao dia tsy ho nila akory fanampiny Accessories mba hifandray ny turntable amin'ny Stereo. Ny tsara indrindra momba io turntable dia fa manana USB seranan-tsambo izay mamela anao hifandray amin'ny MAC na Windows digitize solosaina sy ny toerana tena rakitsoratra. Izany vokatra dia tonga noho ny Mac / PC mifanaraka sahy rindrambaiko sy ny USB tariby. Izany koa dia tonga noho ny replaceble cartridge sy ny loha-akorany.
Modely io dia manana hafainganam-pandeha 3 samy hafa; 33-1 / 3, 45 sy 78RPM. Noho izany, ianao ho afaka hilalao sy mankafy misy firaketana avy amin'ny famoriam-bola ho an'ny izany ny hafainganam-pandeha indrindra modely no miovaova. Raha izany tsy ampy ny Tsoahy ny sain'ny, modely io koa dia mamela anao hanitsy ny dity amin'ny 10% na 20% ary manana avo-marina quartz-maso dity hidin-trano. Tsy manana S miendrika feo sandriko mivory amin'ny Adjustable counterweight, anti-mikorisa amin'ny fanitsiana ary koa haavon'ny feo-sandry fanitsiana sy ny hidin-trano. Nefa tsy voatery mandalo ny sarotra dingana napetraka-up, manome modely izany ho takatry ny mpanjifa fomba hihaino ny rakitsoratra sy ny toerana tena avo maotera Torque.
matihanina: maharatsy ny mifampiresaka:
Ny mivantana-maotera fiara mamonjy haingana start-dehibe.
33-1 / 3, 45 ary 78 RPM hafainganam-pandeha mihaino anao hankafy ny fanangonana ny firaketana an-tsoratra iray manontolo.
Ny tsapan'ny fandrianao toa mitondra be dia be ny voasakantsakan'ny ny etỳ ambonin'ny ny vinyl.
CD mpitam-boky Fizarana USB Section Turntable Fizarana Tape Section General
CD-R / RW Ny firaketana avy any Phono, Tape, Tuner, AUX
Vatasarihana-karazana CD mpitam-boky
Rec Level Control for Analogue Source Ny firaketana
Avereno (1 / REHETRA), shuffle, 32-làlana Program Play
USB Audio nivoaka avy tany Phono, CD, Tape, Tuner, AUX ny PC
MP3 / WMA / PCM * Ny firaketana ny PC / Mac
3-haingana Turntable (33-1 / 3, 45, 78rpm)
Horonam-peo Tape Player
Avo / Normal Tape Fihevitra
Play, Pause, Re, REW Operation
PLL voafintina AM / FM Stereo Tuner
Basse-karazany amin'ny endriky Mpandahateny
Mpandahateny: 2 "-3/4 Full Range Cone X 2
3.5 3,5 W + W Amplifier Output Power
Audio dreninao: x 1 (RCA)
Lafiny (W X H X D): 18-1 / 22 "X 9-1 / 16" X 15-3 / 8 "(470 X 230 X 390 mm)
Raha toa ianao mitady izay mamela mora turntable fandraisam-peo ny tantara, kasety, ary ny fampielezam-peo, mijery intsony tahaka izao no nanome modely ho anareo. Tsy vitan'ny no mamela anao mba hanoratra, dia manana mpanampy ihany koa ny torohevitra ho peo CD-R / RW. Tsy nirakitra an-tsoratra LPs, CD, onjam-peo sy kasety ho PC eo amin'ny endrika tsotra ny USB alalan'ny fifandraisana. Tena 3.5W + 3.5W fanamafisam-peo sy ny basse-Stereo amin'ny endriky karazana fitenenana dia natao mamorona miavaka izany feo mampitony anao-tsofina.
Naorina tao Japana, TEAC dia mpanamboatra vokatra peo nandritra ny 63 taona. Noho izany dia afaka ny miloka ny vokatra dia mendri-pitokisana. Fa ny vidin'ny $ 276, ianao dia mahazo 3-hafainganam-pandeha Analog turntable amin'ny Auto-miverina endri-javatra. Mba tsy hanahirana anao, koa manana RCA Pin Jack torohevitra / Output mba hampifandray misy mpilalao efa misy fitaovana peo. Ny tena fivarotana teboka ity dia modely ny CD burner sy ny horonam-peo tokotanin-tsambo.
Ny amin'ilay efa nanao hoe: izany dia manaitra ny aesthetics amin'ny kely mikasika ny maoderina sy Retro mihevitra. Mampifanaraka ny safidiny, ianao mahazo manana na boky, na mandeha ho azy isa fametrahana ny lalana, rehefa nanoratra ny CD. Misy fanaraha-maso lavitra dia tonga miaraka amin'ity tarika sy hifehy asa avy eny lavitra eny ny tarika. Izany no modely tonga lafatra manodidina.
Mamirapiratra sy mora ny mamaky LCD Display.
Tena bokotra vita fanoloran-tena ho an'ny asa ampiasaina matetika mora miantoka ny fampiasana.
Izany dia kely ny tabataba, isaky ny vinyl no milalao.
Product Weight (amin'ny fonosana): 12lbs
Master CTN Dimensions: 20,27 "X 17,16" X 6,85 "
Hitoby: +/- 10%, 33 1/3 RPM na 45 RPM asa
Inputs: 1/8 "Stereo tsipika haavon'ny
Outputs: RCA (Andalana / Phono), USB Audio
Avy any Rhode Island ny Etazonia, Numark dia nanorina marika izay mahatonga ary mametraka tsara ny teknolojia ho an'ny DJs peo sy mpitendry mozika manerana izao tontolo izao nandritra ny 40 taona. Ny Numark TTUSB Turntable manana ny endri-javatra dia tokony ho toetra turntable mpanova.
Raha toa ianao nanontany tena momba ny hafainganam-pandeha, io turntable milalao amin'ny 33 sy 45 1/3 RPM. Tsy manana Adjustable manohitra ny mikorisa amin'ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny Stereo ny mampifandanja ny. Izany ihany koa dia manana USB seranan-tsambo ho an'ny fifandraisana eo amin'ny turntable ary na PC na Mac. Izany koa 1/8 "Stereo tsipika torohevitra sy RCA tsipika Adjustable outputs amin'ny fanaraha-maso ny dity + 10%. Rehetra ilaina telegrama no omena ho anareo ny hampifandray ny turntable ny solosaina manokana, na Stereo playback rafitra; rehetra noho ny tsy hanahirana. Izany no mahatonga azy mora ny hiova finoana LPs rehetra amin'ny endrika nomerika.
Ny endrika no miavaka. Izany dia tena maoderina miandranandrana sy ny teny iray mba hilazana fa "futuristic". Mifono volafotsy, izany no iray amin'ireo kanto indrindra mijery modely ho hitanao ao an-tsena. Izao no lazaina, ny Numark TTUSB turntable mendrika ny volany rehetra nametraka ianao mba handoavana $ 133 mba hahazo ny tanana.
Tsy manana diecast sy ny lovia aluminium machined faobe ho tsara kokoa sy haingana kokoa kapila tsy tapaka.
Tsy manana S miendrika feo sandry.
Mety mihodina haingana loatra raha mbola milalao.
Turntable fizarana Tonearm fizarana Cartridge fizarana Phono Equalizer Amplifier Analog Output USB Output fizarana Power Power Ny fihinana Amin'ny ankapobeny Dimensions Weight Accessories
Roahy System: Belt Drive
Fihodinan'ny Speed fiovaovana: +/- 2%
Wow sy Flutter: 0.2%
Famantarana-to-Noise Taham: 67dB na ambony (A-mavesatra, 20kHz LPF), 60dB na ambony (unweighted, 20kHz LPF)
Lovia: Aluminium Die-ario
Savaivony ny lovia: 12 ", 30cm
Type: voasakantsakan'ny fahaiza-mandanjalanja, Imahitsy
Arm mahomby Length: 8.8 ", 223mm
Penina Pressure Range: 0 ny 5g
Nanohana Cartridge Weight: 3.5 ny 6.5g
Anti-Skating Vao mizatra: Supported
Type: MM karazana (feo-technica AT95E orinasa nametraka)
Penina endrika: boribory lavalava
Penina Construction: nampikambana Round Shank
Tendrombohitra: Half santimetatra
Frequency Response: 20Hz ny 20kHz
Fantsona Separation: 20dB amin'ny 1kHz
Channel mandanjalanja: 2.0dB
Tracking Force: 1.5 ny 2.5g
Mijidina Tracking Angle: 20 degre
Output TOSIKARATRA: 3.5mV (1kHz, 5cm / sec.)
Penina Pression: 2.0g +/- 0.5g
Cartridge Weight: 5.7g +/- 0.5g
Head-akorandriaka Weight: 10g (anisan'izany Screws, voanjo sy ny tariby)
Fanoloana penina: Audio-Technica ATN95E
Karazana Amplifier: MM karazana (On / alalan'i switchable)
Connector: RCA Pin Jack (Gold-nopetahany takela)
Output TOSIKARATRA: Phono /-dalana, switchable
Connector: USB B karazana
Supported OS: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, OS X Lion (10.7), OS X Mountain Lion (10.8), OS X Mavericks (10.9), OS X Yosemite (10.10), OS X El Capitan (10.11 ), macOS Sierra (10.12)
AC 100 ny 240V, 50 / 60Hz
1.5W (latsaky ny 0.5W amin'ny Standby)
(W X H X D): 16.5 "X 4.6" X 14.0 ", 420 X 117 X 356 MG
Eo ho eo. 10.8 lbs. 4.9 kilao
Fingotra Sheet, EP adaptatera, Counter Weight, Head-akorany (audio-technica AT95E), lovia, Vovoka Cover, fingotra tongotra eroa Vovoka Cover x2, miankina x2, RCA Audio Cable, AC adaptatera (GPE053A-120050-Z), Boky Torolalana (anisan'izany ny Warranty Card)
Ambony iray hafa notch modely avy any Teac, ny TN-300 dia Analog turntable amin'ny naorina-in phono mialoha fanamafisam-peo amin'ny USB output nomerika. Ity no boky iray fehikibo-fiara turntable izay manohana 33 na 45 RPM. Avy any Japana, tsy misy isalasalana fa ity orinasa mamokatra ambony notch turntables.
Tamin'ny taona takatry ny vidin'ny $ 269 ny turntable, dia mety ho tianao ny hametraka izany ny Wishlist. Ny USB Output mamela anao mba hamindra vinyl mozika avy amin'ny firaketana an-tsoratra ny MAC na PC. Izany ihany koa dia manana naorina-in telefaonina equalizer izay mamela anao mifamadika eo amin'ny LINE sy PHONO. Izany dia natao tamin'ny fototra mainty Ary toa miavaka. Ankoatra izany, dia manana volafotsy mikasika ny manodidina rehetra mba hanome azy io ho classy fijery.
Ankoatra ny manana endrika tsara tarehy, io modely tonga miaraka amin'ny Audio-Technica MMVM karazana cartridge AT95E grafofaonina. Endri-javatra mahavariana iray hafa momba izany fa turntable dia nopetahany takela-bolamena ny terminal manana ny oxidation fanoherana. Na dia teo aza izany manana fiantohana fohy, ny endrika sy ny famolavolana izany modely tena mahafaka ny azy. Ho famaranana, raha izany no ao an-teti-bola, dia aza misalasala ny hahazo izany modely tahaka ny mahafinaritra.
Ny Audio-Technica cartridge miteraka lavitra nohatsaraina feo manodidina.
Ny hafainganam-pandeha dia azo ahitsy amin'ny bokotra latabatra.
Io modely fohy dia tonga noho ny Warranty.
05 • Fluance RT80 High Mivadika Amin'ny Vadinao vinyl Turntable Record Player
CABINET fepetra arahana TURNTABLE fepetra arahana TONEARM fepetra arahana CARTRIDGE fepetra arahana fingotra fehikibo fepetra arahana Output fepetra arahana HERY famaritana FOIBE fepetra arahana
CABINET KEVITRA: MDF
Mahavita: voaloko Avo gloss (Black)
VOVOKA FONONY: Eny - Tinted
Fiara System: Belt Drive
Hafainganam-pandeha: 33 1/3 RPM, 45 RPM
Famantarana-TO-tabataba ISAKY NY (mavesatra): 67dB na ambony (A-mavesatra, 20kHz LPF)
Famantarana-TO-tabataba ISAKY NY (UNWEIGHTED): 60dB na ambony (unweighted, 20kHz LPF)
TURNTABLE Mat: Nahatsiaro
TONEARM TYPE: voasakantsakan'ny voalanjalanja, S-Type
MANOHITRA-Skating fanitsiana: Eny
Andry fototry FAMOAZANA: Eny
TONEARM KEVITRA: Aluminum
FIASANA MAHOMBY TONEARM faobe: 28.2 grama
FIASANA MAHOMBY TONEARM Length: 224mm
HEADSHELL tendrombohitra: H-4 bayonet Mount
CARTRIDGE TYPE: mampihetsi-po Magnet (MG)
CATRIDGE MODELY: Audio Technica: AT91
Fanoloana penina: ATN91
Penina: 0.6mil nampikambana bongo (Diamond)
CANTILEVER: Carbon Fibre
Matetika Valiny: 20-20,000Hz
Fantsona fahalotoany ihany koa; 18dB amin'ny 1kHz
Fantsona fifandanjana: 2.5dB na latsaka amin'ny 1kHz
Entana IMPEDANCE / CAPACITANCE: 47k Ohms / 100pF
Output TOSIKARATRA: 2.5mV +/- 3dB
Recommended TRACKING Force: 2.0g (+/- 0.5g)
Mitsangana TRACKING zoro: 20 degre
CONNECTOR: RCA (Gold-nopetahany takela)
PREAMP: Eny, PHONO / LINE Switchable
Ground TERMINAL: Eny
Dimensions: 16.5 "X 5.5" X 13,75 "
UNIT Weight: 4,5 kilao (9.9 lb)
INONA no ahitana: RT80 Turntable, Vovoka Cover, 45 adaptatera, Nahatsiaro Mat Slip, 6ft RCA Cable Miaraka Ground Wire, 100V - 240V (50 / 60Hz) AC Power adaptatera, Quick Start Guide, miavaka Customer Support, 2 Taona Manufacturer ny Warranty
Ny fototra fampidirana ity modely amin'ny Fluance; izany dia tonga noho ny Premium cartridge, diamondra penina, fehin-kibo fiara, naorina-in preamp, Adjustable counterweight miaraka amin'ny anti-Skating ary mazava ho azy ny hazo mainty malamalama kabinetra. Efa nahasarika ny sain'ny fa? Mahary ny fampisehoana natao ny mpanakanto, Premium modely singa io dia mamela izany toe-panahy mahatoky avo fehin-kibo entin'ny turntable mba hamokatra madio mihaino Analog traikefa.
Fluance dia orinasa izany miorina any Ontario ary mino fa tsara turntable Tsy voatery ho lafo vidy. Te ny cartridge izay mamokatra miavaka mazava? Jereo intsony toy ny modely ity dia tonga noho ny fampisehoana avo AT95E Audio Technica cartridge. Koa, ny diamondra ellipitical tipped penina dia natao mba manara-maso ny firaketana an-tsoratra marina tsara grooves amin'ny lehibe kokoa sy araka ny marina ho an'ny famaritana ambony teny. Ny voalanjalanja aluminium S-Type tonearm, playback tonga lafatra dia afaka ho tratra ary izany no miantoka ny penina nitsahatra lalina ao amin'ny firaketana an-tsoratra ny Groove. Noho izany, dia mamokatra feo tsipiriany rehetra indistinguishable avy tany am-boalohany peo.
Ny tsara tarehy noix izay vita sokitra tamin'ny governemanta no ventin-peo-kilasy (MDF) incorporates hazo sy fitokana-monina tongotra, ny aluminium lovia, ary ny fingotra tsihy taratasy kely izay miteraka ambony fitokana-monina avy amin'ny tsy ilaina peo no mampihovotrovotra azy. Nahasarika famantarana mazava dia vokatra manara-penitra Texas fitaovana 'preamp, alalan'ny terminal sy volamena tany RCA nopetahany takela-dalana outputs izay manome avy eny ambony mafana, ny tena feo. Tsara indrindra, Fluance miantoka mpanjifa noho ny androm-piainany fanohanana momba ny modely. Fa $ 199,9, modely io dia mangalatra.
Ambony kokoa penina mahatonga ho madio Analog traikefa mihaino.
Malama playback dia mety tsara ho an'ny fotoam-pivoriana ela mihaino.
Natao ho an'ny fampisehoana lehibe.
Manana olana kely ny hafainganam-pandeha.
Turntable fizarana Tuner fizarana CD Player fizarana MP3 Bluetooth® fizarana Amplifier fizarana Audio inputs Audio outputs écouteur Output gazety fizarana Units ankapobeny lafiny Weight
Supported Speed: 33-1 / 3, 45, 78 RPM
Wow sy Flutter: 0.25% (Jis WTD)
S / N tahan'ny: 50dB na mihoatra (IHF-A)
Penina: STL-103 (safira, fa LP / EP)
Tuner karazana: PLL voafintina Tuner
Isan'ny Presets: 20 AM + 20 FM
Santionany Frequency: 16k ho 48kHz
Bit ny tahan'ny: 8k ny 320kbps
WMA: DRM tsy nanohana
Santionany Frequency: 32k / 44.1k / 48kHz
Bit ny tahan'ny: 48k amin'ny 192kbps
S / N tahan'ny: 80dB na mihoatra
Isan'ny ambony indrindra fampirimana: 255
Isan'ny ambony indrindra rakitra: 999
Class: Class2 (max isan-karazany 10m / 33 ft.)
Hevitra ato Anatiny Fiarovana System: SCMS-T
Output Hery: 25W + 25W
Type: Rear amin'ny endriky Bass-Type
Power famatsiana: AC120V, 60Hz (Etazonia / Kanada) AC230V, 50Hz (UK / Europe)
Power fanjifàna: 25W
Main vondrona: 460 (W) × 215 (H) × 380 (D) mm18.1 "(W) X 8.5" (H) x 15,0 "(D)
Mpandahateny: 150 (W) × 250 (H) × 224 (D) mm, 5.9 "(W) X 9.9" (H) x 9.1 "(D)
Main vondrona: 6.6kg
Accessories: Remote Control (RC-1312), Batteries for Remote (AA X 2), adaptatera ho an'ny EP, Turntable Cover, miankina X 2, fingotra Mat for Turntable dia lovia, AM Antenna, FM Antenna Cable, Stereo Mini plug Cable, gazety Cables (3m / 10ft) x 2, Tompon'ny ny Manual (Warranty Card)
Avy any Japana, TEAC efa tafiditra ny orinasa turntable tena tsara ny vokatra mahatalanjona. Izy ireo no manao turntables efa nandritra ny 60 taona, ary raha marina izany dia mampiseho ny fahaizany ao amin'io faritra io. Raha mitady ny rehetra-in-iray turntable, jereo intsony. Izany dia midika hoe nanaovana no mahagaga toy izany Retro fijery tsara tarehy.
Io modely dia turntable Stereo rafitra izay azo avy amin'ny CD, Bluetooth sy ny onjam-peo fiasan'ny. Matetika rehefa mitady turntables, dia Te hahazoana antoka fa manana endri-javatra rehetra ilainao. Jereo intsony tahaka izany dia manana modely ny endri-javatra rehetra no mila Feno hipoka ho iray. Fa ny vidin'ny $ 318, dia mamela ny fifandraisana amin'ny finday avo lenta Wireless, takela-bato sy ny solosaina amin'ny alalan'ny Bluetooth. Tena mety ianao dia Te raiki-pitia amin'ny modely io, rehefa mahazo azy io.
Momba ny hafainganam-pandeha, izany dia 3-hafainganam-pandeha turntable amin'ny 33-1 / 3, 45 sy 78 RPM, ary mamela playback avy LP / EP ny firaketana an-tsoratra sy ny SP. Output izany fahefana dia 25 X 25 Watts, ary tafiditra ao amin'ny fonosana dia 2-Lalana Bass amin'ny endriky Mpandahateny. Izany no mahagaga fifanarahana noho ny vidiny. Izany ihany koa dia manana lovia Loading CD Player izany mifanaraka amin'ny CD-R / RW Discs sy ny MP3 / WMA raki-daza. Ho famaranana, dia tena tsara boribory turntable rehetra.
Manana Retro 70 fa ny teknolojia maoderina hahatsapa amin'ny tombony.
Ny hazo dia tsara tarehy sy ny vatolampy mafy.
Ny firaketana an-tsoratra mitendry haingana loatra.
07 • Pro-Ject - Début Carbon DC (Black)
Roahy Toro lalana: fehikibo fiara
Lovia: 300mm vy amin'ny tsapan'ny fandrianao
Mains nitondra: Stainless vy
Speed mandresy: +/- 0,80%
Famantarana ny feo: -68dB
Mahomby halavan'ny sandry: 218.5mm
Sandriny mahomby faobe: 6.0g
Tracking hery: 10-30mN
Power fifandraisana: 110/120 na 230/240 volt -50 na 60 Hz
Anisan'ny Accessories: 15volts DC / 0.8A fahefana famatsiana, vovoka fonony
Standby fahefana fihinanana: <1 Watt
Dimensions: 415 X 118 X 320mm (WXHXD) sarony mihidy
Pro-Ject Audio Systems Niorina tamin'ny 1990 tany Aotrisy, na izany aza ny orinasa mpamokatra entana zavamaniry ao Repoblika Tseky sy Slovakia. Ity matihanina turntable ny Pro-Ject no mety tsara ho an'ny karazana fifandraisana isan-karazany toy ny multiroom rafitra (SONOS, HEOS sns), fahita lavitra, soundbars sy feo azo entina.
Inona no modely tsara momba izany dia mora ny nanangana ary manana fehikibo amin'ny fiara silicone fehin-kibo sy ny ambany hovitrovitra maotera. Amin'ny 8,6 "aluminium tonearm amin'ny safira bearings sy mialoha niainga Ortofon OM5e cartridge, modely io dia kilasy ambony na dia manana kely mideza vidin'ny $ 399. Izany dia nanorina-in phono mialoha miaraka amin'ny fanamafisam-peo sy ny nomerika output analogue. Mba tsy hanahirana anao dia nopetahany takela-bolamena RCA interconnect tariby dia tafiditra ihany koa.
Misy mahafaly haavon'ny mazava momba ny feon'ny modely ity. Izany ihany koa dia manana feo madio sy hamiratra acoustics. Momba ny endrika, dia tanteraka mainty ary izany no tena kanto. Ary Te hiditra tsara ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny sy ny nanaovana ny faharoa dia saika tsy misy. Inona no mahatonga izany modely miavaka avy ny ambiny dia izany turntable manokana decoupling tongotrareo ho mahomby. Amin'ny ankapobeny, izany no zava-dehibe modely tsara ny mandinika.
Ny latabatra aza dia manana fijery mendri-piderana.
Izany dia tena tsy miandany tonal mandanjalanja.
Tsy misy mandeha ho azy hiverina ho amin'ny sandriny.
Rehetra ny lalana avy any UK, Rega dia tsara orina marika izay mamokatra Turntables mahatalanjona. Noho izany, dia tsy misy mahagaga ny RP1 dia toy izany vokatra mahagaga. Priced amin'ny $ 445 izay kely ambony kokoa noho ny turntables ambony, dia notdisappoint Ho anareo tahaka ny notch ambony.
Izany dia marika Rega vaovao RB101 tonearm izany tena tsara tarehy. Koa, dia manana Rega Carbon mihetsika cartridge andriamby. Na izany aza ny cartridge mba tsy ho ny tsara indrindra misy. Izao no lazaina, dia ambany hovitrovitra maotera dia ny avo lenta sy manana vokany lehibe marina tsara miaraka amin'ny zana-lovia fivoriana. Fa tsara ny hafainganam-pandeha fahamarinan-toerana, dia manana ny rehetra Phenolic vaovao resinflywheel vokatry ny lovia.
Izany dia midika hoe famolavolana dia mahagaga. Misy mifono mainty sy fotsy, ka tena kanto izany futuristic fijery. Tena mitady azy io ankehitriny dia mijery Ho mahagaga raha napetraka na oviana na zorony ao an-tranonao. Izany dia midika hoe miaraka mitantana madio sy ny feo mahagaga specs, ianao tsy hitady intsony ho turntable. Tsy isalasalana, fa ny mangalatra ny $ 445.
Easy ny hanorina.
Ambany kalitao avo maotera hovitrovitra.
Mila mba hanatsarana ny cartridge.
Product Dimensions 13 x 17 x 4,5 santimetatra
Vokarina ao amin'ny Repoblika Tseky, Music Hall dia marika izay manao turntables Efa nandritra ny 50 taona. Experience Tena ilaina ary izany no antony Hall Music dia iray amin'ireo mpisava lalana ao amin'ity orinasa.
Izany dia 2-hafainganam-pandeha turntable amin'ny dynamically mifandanja lovia izay ilaina amin'ny fahazoana tanteraka feo. Manome izany tonearm Adjustable VTA ho an'ny marina cartridge fampifanarahana. Koa, fa mifandanja dynamically firaka lovia mihazakazaka amin'ny avo Stainless vy marina tsara sy ny varahina mitondra fivoriana. Mora ny nivory ary tena tsara dia ahitana fampianarana boky fampianarana ary ny 45 RPM adaptatera.
Izany dia mitovy amin'ny nanaovana ny RP1 fa izany dia mifono amin'ny mena. Tsotra dia ny teny izay mamaritra ny famolavolana io vokatra. Amin'ny feo tsy mampino sy ny endrika, tsy misy antony tsy haka azy. Fa $ 499, ianao ho tratry ny ananany ny tanana iray amin'izao fotoana izao.
Ny feo dia mahagaga sy tsara tarehy.
Tena tsara tarehy dia tsotra endrika nefa maso-misambotra.
Tsy misy fanaraha-maso ny mifamadika hafainganam-pandeha.
10 • U-Miverena Audio - mihodina Plus Turntable (manga)
12.5 lbs, 5 x 17 x 13 ", 0,125% Wow & flutter, -79 dBA S / N tahan'ny, -63 dBA ho fikotroky
Vita avy any Etazonia amin'ny alalan'ny U-Miverena Audio, izany dia avo-fampisehoana turntable priced amin'ny $ 309. Azo antoka fa izany dia mahagaga turntable izay tonga noho ny fametrahana mazava tsara tonearm amin'ny Ortofon OM 5E Cartridge, machined acrylic lovia, ary ny boky fehikibo fiara ny 33 sy 45RPM.
Dia tena mora ny nametraka-up sy ny fampiasana. Noho izany fanohanana ara-teknika androm-piainany, Te manontany ianao dia manontania tena hoe inona no tsy mba toy ny momba izany turntable. A vovoka fonony, RCA tariby, nahatsapa fandrianao, ka herintaona fiantohana dia tafiditra ao amin'io modely. Mba tsy hanahirana anao ny Adjustable counterweight dia tafiditra ihany koa.
Mamaritra hendry, dia amin'ny manga sy mifono manana Soso-kevitra ny mainty sy ny volafotsy. Toa mbola classy ankehitriny. Noho izany feo mahagaga kalitao sy ny feo be sandry toetra, modely izany dia tokony hatao ao anaty fiheverana lehibe, raha izay tadiavinao mba hividy turntable.
Amazing kalitaon'ny feo.
Lehibe sandry tsara feo.
Tsy mandeha ho azy.
Tsy misy fanamafisam-peo mialoha.
Best Portable valizy Turntables 2017-Bu ...